Ronaldo ayaa tallaabo u jira inuu sameeyo rikoodh cusub oo Taariikhi ah kulanka ay caawa wajahayaan xulka Luxembourg – Gool FM
Ronaldo ayaa tallaabo u jira inuu sameeyo rikoodh cusub oo Taariikhi ah kulanka ay caawa wajahayaan xulka Luxembourg
(Europe) 11 Okt 2019. Cristiano Ronaldo ayaa tallaabo u jira inuu sameeyo rikoodh cusub oo cajiib ah ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta ah, kaddib marka uu caawa ciyaaro kulanka ay wajahayaan xulka qaranka Luxembourg.
Xulka qaranka Portugal ayaa waxay caawa ku soo dhaweyn doonaan garoonka Estadio Jose Alvalade dhigooda Luxembourg, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulammada isreebreebka ee koobka Euro 2020.
Haddii Cristiano Ronaldo uu caawa ka dhaliyo hal gool xulka qaranka Luxembourg, wuxuu gaari doonaa goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta heer qaran iyo dhammaan kooxaha uu la soo ciyaaray.
34-sano jirkan ayaa haddii uu caawa dhaliyo 1 gool, wuxuu noqon doonaa xiddiga lixaad ee kubadda cagta ee guushan gaara, wuxuuna kaga sara mari doonaa inbadan xiddiga ay ku xilfaltamaan kubadda cagta ee Lionel Messi.
Ronaldo ayaa dhaliyay 699 gool xirfaddiisa ciyaareed ee kubadda cagta oo dhan, waana in ka badan 27 gool Lionel Messi, kaasoo ilaa iyo haatan dhaliyay 672 gool ee ah xulkiisa qaranka Argentina iyo Barcelona.
Cristiano ayaa haddii uu caawa gaaro goolkiisa 700-aad wuxuu soo barbareyn doonaa, xiddigihii kaga horeeyay inay gaaraan guushan, kuwaasoo dhaliyay goolashan iyo in ka badanba, sida Josef Bican, Romario, Pele, Puskas iyo Gerd Müller,
1- Josef Bican 805 gool
Romario 772 gool
3 – Pele 767 gool
4 – Puskas 746 gool
Gerd Muller 735 gool
6.Cristiano Ronaldo 699-gool
Lionel Messi 672 gool.
La yaab malahan in Cristiano Ronaldo uu yahay gooldhaliyaha ugu sarreeya xulka Portugal isagoo dhaliyay 93 gool 160 kulan oo uu saftay.
Kaliya xiddiga reer Iran ee Ali Daei ayaa dhaliyay 109 gool oo caalami ah, waana rikoodh kale ee taariikhi ah uu Ronaldo doonayo inuu sameeyo, si uu u noqdo gooldhaliyaha ugu sarreeya abid xulalka qarammada adduunka.
CR7 ayaa dhaliyey 5 gool 31 kulan oo uu u ciyaaray Sporting, waxa uu dhaliyey 118 gool 292 oo uu u saftay Man United, intii uu ku sugnaa Spain waxa uu dhaliyey 451 gool 438 kulan oo uu ciyaaray, halka 32 gool uu u dhaliyey Juventus 51 kulan oo uu u ciyaaray, waxaana xisaabta sidoo kale lagu darayaa 93 gool oo uu u dhaliyey xulkiisa Portugal.
Laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa Real Madrid bisha September oo lagu dhawaaqay
“Barcelona waa inay ciqaabtaa xiddigan” – Rivaldo